ရခိုင်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလှုငွေလူကြရအောင် (ဘဖောနှင့်ရွာသူားများသို့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » ရခိုင်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလှုငွေလူကြရအောင် (ဘဖောနှင့်ရွာသူားများသို့)
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 9, 2012 in Opinion - Op-ed | 124 comments
ကျွန်တော်လည်း ဒီစာကိုရေးလိုက် ဖျက်လိုက်နဲ့ တွေဝေနေပါသည်။
ဘဖော ရဲ့ မောင်းတော ဒေသ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငွေ ငါးသိန်းလှုမည်ဆိုသည်ကို ၀မ်းသာထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တစ်သိန်း ပါဝင်လှုဒန်းလိုပါကြောင်း အသိပေးချင်တာပါ ။
တဘက်မှာလည်း မကြာသေးခင်ကမှ ပန်းတနော် အလှုလုပ်ထားတဲ့ ရွာသူားတွေကို စိတ် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေ ခဏ ခဏ လာရင် ၊ အလှုခံတွေ ခဏ ခဏ လာရင် စိတ်တို စိတ်ရူပ်ရတယ် လေ ။
တစ်ဘက် က ကြည့်ပြန်တော့လည်း ဒါဟာ ဒီအချိန်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် ပြသင့် ပြထိုက်တဲ့ အမျိုးသားရေး ဖြစ်နေပြန်ရော။
ဒါနဲ့ မနေ့ ည ကတည်းက ရေးလိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ ။
အခုတော့ ဘာဘဲပြောပြော ပြဿနာက မဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ ဖြစ်လာပါပြီ။ ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့ပါဘူး ။ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ ။ အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းကြမလဲဆိုတာ အဖြေရှာရပါတော့မယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာ အနည်းဆုံးတော့ ဆွေးနွေးနိုင်ကြရအောင် တင်လိုက်ပါတယ် ။
MG က ခေါင်းဆောင်ရဲမယ့် လူသာရွေးလိုက်
ဆိုတာ ဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာလည်း ဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ် ။
ခေါင်းခံပြီးငွေကောက်ပေးဖို့ အတွက် ဆိုလိုချင်တာလား (သို့ ) အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်လို့ မြင်လို့လား ။ ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်း သိလိုပါတယ် ။
နောက် လှုကြပါပြီတဲ့ ။ ပြီး ဘယ်မှာ ဘယ်သူ့ကို သွားပြန်လှုမလဲဆိုတာလည်း မေးခွန်းတစ်ခုပါ ။ ဘယ်လိုထိရောက်အောင် အသုံးချမလဲဆိုတာလည်းမေးခွန်းတစ်ခု ပါ ဆိုတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လောလောဆယ် ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ မေးခွန်းသုံးခုရှိပါတယ် ။ စိတ်ပါဝင်စားကြရင်ဆွေးနွေးပေးလိုပါတယ်။ ငွေလှုတာ မလှုတာ ကပဓါန မဟုတ်ဘဲ အကြံဥာဏ်လေးတွေတော့ လှုပါဦး။
(၁) ဘယ်သူခေါင်းဆောင်မလဲ။ ရွာထဲက ရပ်သိရွာသိ တစ်ဦး ခေါင်းဆောင်သင့်ပါသည်။
(၂) အလှုငွေ လောလောဆယ် ၆ သိန်းရပါပြီ။ ဘယ်မှာ သွားလှုမလဲ.ဘယ်သူ့ကို သွားပေးမလဲ။
(၃) ဘယ်လိုထိရောက်အောင် အသုံးချမလဲ။
အစလေးတစ်ခု အနေနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါ ။ တိုတာရှည်တာတော့ အများရွာသူားများရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှု့ပေါ်မှာသာ မူတည်မှာပေါ့နော် ။ နောက် သူကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက် ။
ကျွန်တော် ကပ်စေးနဲ နိဂိမိ က လှုတယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို
အားမသန်တာကြောင့် ဘေးထွက်နေပါမယ် ။
ကျွန်တော့် အလုပ်ထဲက ဘူးသီးတောင် မောင်တောက ရခိုင် ညီအကိုများနဲ့အတူ
သူတို့ မိသားစုတွေရဲ့ထမင်းအိုးကို စောင့်ရှောက်ရင်း ဂေဇာတ်ရွာသူားတွေ ရခိုင်မြေကို
ခြေချလာမည့် အချိန်ကို ကြိုဆိုနေပါမယ် ။
နောက်တခုပြောချင်တာ ….. ရခိုင်ပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးက…..
နောက်တခုပြောချင်တာ ….. ရခိုင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးက…..
အဲဒီခေါင်းစဉ်ကိစ္စလဲ ပြန်ဆွေးနွေးရမှာပါ ကိုရင်နိဂိမိရေ..
ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလှူငွေ ဆို ဘဲ့နှယ်လဲဗျ..။
(ဒုက္ခသည်/ ကယ်ဆယ်ရေး/ အရေးပေါ်/ တည်ဆောက်ရေး) စတဲ့စကားလုံးတွေ ရှောင်ပြီးတော့ပေါ့…။
ပြီးတော့ ဒီအချိန်ကြီး မအိပ်သေးပဲ ကိုရင်က ဘာလုပ်နေတာလဲ….
ဦးပါကရော ဘာလို့ မအိပ်သေးတာလားဟင်….:D
ကျမကတော့ တနေကုန် ချာလပတ်ရမ်းအောင် လုပ်ကိုင်နေရလို့ ညမှ ၀င်ဖတ်ရတယ်။ ဖတ်မိတော့ လည်း ဟိုဟာလည်း ဖတ်ချင် ဒီဟာလည်း ဖတ်ချင်နဲ့ ။ မနက် ၁ နာရီတောင် ခွဲနေပါပေါ့လား။
ကျေးဇူုးပါတပ်မရေ. သောက်ထားတာတောင် ထောက်ပြနိုင်သေးတယ်နော်.. :grin:
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် ပူနေတာက တစ်မျိုး
သောက်ထားလို့ပူနေတာက တမျိုး
ဦးဦးပါလေရာ ၊ မပဒုမ္မာ ၊ ကို Htoosan ၊
ကို Black Chaw ၊ ကို ရွှေတိုက်စိုး ၊ ကိုအမတ်မင်းရယ်၊ ကို M လုလင် ၊
မမ ၊ ( ဆူး ၊ E Tone ပျောက်နေတယ် ရုံးပိတ်ရက် မို့လို့လား မသိ )
မန္တလေးကတော့ လွယ်ပါတယ် ၊
ထုံးစံအတိုင်း ဦးပေါက်ပေါ့ ၊
ငွေကောက်ကြရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ် ။
လောလောဆယ်တော့ အဲဒီလူတွေထဲက ၊
လုပ်ပေးလိုသူ တစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ၊
ချက်ချင်း Publish စလုပ်ရတော့မယ် ။
အရှိန်လေး ရနေတုန်း လုပ်မှရမယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ လှူတာကတော့ အရမ်း အမြန်ကြီး ၊
သွားလှူစရာတော့ မလိုပါဘူး ၊
ဒုက္ခသည်တွေက ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး ။
အခြေအနေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်သွားမှ ၊
အခြေအနေ Settle ဖြစ်သွားမှ ၊
ဘယ်နေရာကို လှူသင့်တယ် ဆိုတာကို ၊
အားလုံး ဝိုင်း ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ ။
Final Date ကိုရော ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ ။
လကုန် ၃ဝ ရက်နေ့ သတ်မှတ်ရင်ကော အဆင်ပြေမလား ။
သူကြီးရေ တတ်နိုင်ရင် ဒီ Post ကို Sticky လုပ်ပေးပါဗျာ ။
အဘဖောရေ …. ပိတ်ရက်မို့ …. အင်တာနက်မသုံးဖြစ်တာပါ … ။
ဒါပေမယ့် သတင်းတွေတော့ ရပါတယ် …. ။ ရွှေတိုက်တို့ ၊ ကိုမတ်တို့ နဲ့ ညှိပြီး …. ပါဝင်လုပ်အားပေးဖို့လည်း စိတ်ကူးထားပါတယ် … ။ ဖုန်းဆက်သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။
အလှူရှင်ရော ၊ အလှူခံမယ့်လူတွေရော ၊ ပါဝင်ကူညီသူများကိုပါ … တစ်ခုတော့ သတိပေးချင်ပါတယ် …. ။ အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ မကျရောက်စေဖို့ပါ ။ အထူးသတိပြုဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ် … လှို့ဝှက်စွာ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရပါမယ် ။
ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ၊ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စေတနာ ၊ စိတ်ထက်သန်မှုတွေကြောင့် … အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ။
မပြောသေးဘူး အဖေါ်အပေါင်းတွေလဲ ပါဝင်နိုင်စရာရှိပါတယ်….
ဂေဇက်အဖွဲ့ အနေနဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်အကူညီပေးနိုင်ရင်..
သောကြာနေ့ ကမီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူများကို
ဂေဇက်အဖွဲ့ သားတွေအနေနဲ့ က
ဒီနေ့ ညနေလောက် ကိုဦးဦးပါလေရာတို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးပါ့မယ်။ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြေးစရာ လွှားစရာရှိရင် ကျနော် ရွာစားကျော်မှ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ကူညီပါမယ်..
ကျနော့ ဖုန်းနံပါတ်လည်း အားလုံး သိပြီးသာဖြစ်မှာပါ..
ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတခုပါပဲ။ အချိန်မဆွဲပဲမြန်မြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကဘယ်မှ
၀မ်းသာတယ်ဗျာ … ဦးဆောင်မယ့်သူရှာနေတာ …. မန်းလေးမှာဆို ပိုက်ဆံလက်ခံမယ်သူ တစ်ယောက်ထားလိုက်ဗျာ … ရန်ကုန်မှာလည်း တစ်ယောက် တစ်ခြားမြို့များမှာ ထိုနည်းတူစွာ နှင့် နောက်မှ အားလုံး စုလျှင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ မအားတော့ မလုပ်ရဲသေးလို့ မပြောဖြစ်တာ … ကျွန်တော်လည်း တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အလှူငွေ ငါးသောင်း ပါဝင်ပါမည် ….. လုပ်အား များလိုလို့ကတော့ အမြန်သာ ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ပါ …..
ညက ရွှေကြည်တို့ရပ်ကွက်မီးပျက်ပြီးကွန်ကျသွားလို့ ခုမနက်မှပို့စ်ကိုတွေ့ပြီးဖတ်မိလို့နောက်ကျသွားတယ်။
ရွှေကြည်အများကြီးမတတ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ရော သူငယ်ချင်းတွေပါ စုပေါင်းပြီးလှူပါ့မယ်။
ရွာသူ၊ရွာသားများ နှင့် စီစဉ်သူ အားလုံးကို လေးစားလျှက်
ရွာသားအပေါင်းရဲ့ တက်ကြွမှုဂဒေါ့ အားရှိဇရာပါဘဲ…။ အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီးအနေနဲ့ဂဒေါ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဃတဆင့် လှူစေဂျင်ဒယ်။ သူတို့အဖွဲ့မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကို ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေးတို့လို မှတ်ကျောက်တင်ခံပြီးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဒယ်။ သူတို့က ရလာတဲ့အလှူငွေတွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးချရမယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်…။ သတိပေးချင်တာ ရလာမည့် အလှူငွေများကို စိတ်ခံစားမှုထက် ဦးနှောက်အသုံးချပီး တကယ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူများ ဦးဆောင်ပြနိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတူရင် ထပ်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ ၊ အစိုးရ စသည်ဖြင့်နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး အသွေးအရောင်ကင်းကင်း နဲ့လှုတာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ အသွေးအရောင်တွေပါလာရင် နောက်ထပ်မထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေ ထပ်ဖြစ်လာမှာစိုးမိပါတယ်။
ဒီကိစ္စက နိုင်ငံရေး အခြေခံဖြစ်လာတာ ကိုနေးချားရယ်.. နိုင်ငံရေးမပါဘဲ ဘယ်ရှင်းလို့ရပါ့မလဲ… ဒါ အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်ဘူး သို့သော် လက်တွေ့အကျဆုံးလို့ ပေါဂျင်ဒယ်..။ (နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ လှူကြဖို့ပြောဒါဗာ.. သံသရာအတွက် ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက် လှူကြမည့်ပွဲမှာ မဟုတ်တာ..)
Mann Thu Lay says:
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ညီမက ဂေဇက် စာဖတ် ပရိသတ်ပါ။ ရခိုင် အရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပထမဆုံး comment ပေးတာဖြစ်သလို မြန်မာလိုလဲ မရိုက်တတ်ပါဘုး။ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းချင် ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှ လက်ခံယူမည့်သူကို သိပါရစေ။
ဒီနေ့ည လေးပေါက် ပြန်ရောက်မယ်လို့
လေးပေါက် ဖုန်းနံပါတ်။ ။
ခေါင်းဆောင် ကို ဦး ဦး ပါလေရာ၊ ဒေါက်တာ ပဒုမ္မာ ၊ ဆူး ၊ မမ ၊ ကိုနေချား၊ ကို ဘလက်ချော
ကိုပေါက် ။Etone ဒေါက်တာAKKO တို့ကို ဦးဆောင်စေချင်ပါတယ်
နောက် ရွာသား အမာခဲတွေက ၀ိုင်းဝန်း အားဖြည့်စေချင်ပါတယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်ဗျား
စနေလဲ လှူချင်ပါတယ် ……..
ဘယ်ကိုလွှဲပေးရမယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် …..
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အဖွဲ့ ၊တာချီလိတ်ကနေပြန်တဲ့နေ့ တုံးကအရမ်းလေးစားရလွန်းလို့ 
ကိုယ်တိုင်ပဲ လှူလှူ၊ တဆင့်ခံနဲ့ပဲလှူလှူ၊ တို့အမျိုးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်တာပါဘဲ။ တဆင့် လှူမယ်ဆိုလျှင် ကိုကြောင်ကြီးပြောသလို ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့အပြင် နာရေးကူညီမှုအသင်းတို့ one moreတို့လည်း ရှိပါတယ်။
ဂေဇက်ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားပြသပါစို့ လား..။။
ဟင်းပြောရ ရင်တော့ နည်းနည်း ခတ်တယ် အကို ရ အဲ့လို လှူလိုက်ပါပြီတဲ့ ကိုပြောသလို့ ဘယ်လို့တွေ ဘယ်သူကို ဘယ်နေရာ မှာဆိုတာက တော်ောတ် ပြောရတာ ခတ်ပါတယ် ညီမ အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်တိုင် တက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းကူညီပေးရင် တော့ ကောင်းမယ် ထင်တယ် ကိုယ်တိုင်လှူမှ ပိုမိုထိရောက်တယ်လို့လည်းထင်တယ် အခုအချိန်မှာ အမဲ့ဒီနေရာမျာ မတည် မငြိမ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် သွားဖို့ခညိး မဖြစ်နိုင်တော့ အချိန် ခဏလောက် စောင့်လိုက်တာ ကောင်းမယ်လို့ ယူဆပါတယ် ဒါကတော့ ညီမ အမြင်ပါ……………..
ရွာသူားတို့ရေ ဆက်သွယ်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ခဏစောင့်ပေးပါနော် ။
ဒီနေ့က ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေလို့ ၊ နက်ဖြန်မှ လူစုံမှာမို့ပါ ။
Ye Yint Hlaing
ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ ..အဘဖေါ ကို ကျနော့အနေနဲ့ ဦးစွာချီးကျုး ပါရစေ
အလုပ်အကိုင်ပျက်လို့ စားရေးအခက်တွေ့နေကြတဲ့ ချို့တဲ့တဲ့ မိသားစုတွေအတွက်ပါရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ
အတွက်လိုအပ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ရရှိပြီးသားအလှုငွေထဲက အချို့တစ်ဝက်ကို ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးရေး
ကို ပြုသင့်/မပြုသင့် ၀ိုင်ဝန်းစဉ်းစားပေးကြပါဦး။
အောက်ပါ ဖုံးနံပါတ်နှစ်ခု ကို မနက်ဖြန် နံနက်မှ စတင် ဆက်သွယ်လို့ ရပါပြီ။
ကိုရွှေတိုက်စိုး .. ၀၉ ၄၉၃၀ ၃၀၄၅
ကို အမတ်မင်း .. ၀၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅
ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်များရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပေးထားသည်များကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ သို့သော် တင်ထားသော ဖုံးနံပါတ်များကို ကျွန်တော်ပြန်ဖျက်ထားပါသည်ခင်ဗျာ။ မလိုလားအပ်သော နှောက်ယှက်မှု့များ မဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
သူ ကြီး အလျှူ ဒါန လုပ်ချင် သူတွေ ကို သာဓု ခေါ်ပါတယ်။ အခုလို အလျှူ မျိုးတွေ နောက်ထပ် ပေး စရာ မလို အောင် ဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက် လူသတ် ဖျက်စီး မှုတွေ ထပ် မဖြစ်ရအောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပန်း လုပ်ဆောင် ကြတာဟာ ခုလို အခြေအနေ မျိုးမှာ အလျှူ ပေး ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မလှူချင်ပဲနဲ့ လှူရတာ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပြောစရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ လူတိုင်းသိပါတယ်။
အဲ…လှူချင်လို့ လှူတာလဲ မကောင်းပါဘူး။ ဥပမာ… ရေတွေသိပ်ပေါနေတဲ့ရွာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရွာက ကိုယ့်ရပ်ရွာ.. ရေတွေကတော့ ပေါမှပေါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ရေတွင်းလှူချင်နေတယ်။ ရွာမှာတော့ ရေက ဒါလောက် မရှားဘူး။ ပေါနေတယ်။ အဲဒီအလှူမျိုးဟာ လှူချင်လို့ လှူတာပါ။ အကျိုးဘယ်လောက်များမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ လှူကြတာက အဲဒီလို လှူချင်လို့ လှူကြတာတွေ များပါတယ်။ စဉ်းစားပြီး သုံးသပ်ကြပါ။
အကောင်းဆုံး အလှူက လှူသင့်လို့ လူတာ။ (လှူသင့်လို့) ဟုတ်ပါတယ်။ အခု ရခိုင်ဒေသ…. သူတို့မှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ လှူနိုင်တဲ့အနေအထား အထိုက်အလျှောက်ရှိနေကြပါ တယ်။ ဒီတော့ လှူသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ ဘယ်မှာ ဘယ်လိုလှူရမယ်ဆိုတာ ရှာကြည့်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အခုအလှူဟာ… ကိုယ့်မှာ ငွေတွေပေါနေလို့ တဖက်လူလိုလို… မလိုလို.. လှူချင်လွန်းလို့ကို လှူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မလှူချင်ဘဲနဲ့ ကြောက်လို့.. ဘာကြောင့်ညာကြောင့် လှူတာမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်.. လှူသင့်လို့ လှူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးညီညွတ်ရင် ကောင်းပါတယ်။
လှူသင့်လို့ လှူတာဖြစ်သလို.. လှူသင့်တဲ့ နေရာကိုလဲ ခေါင်းဆောင်များမှ အထူးကျိုးစားရွေချယ်ကြပါ။
လူသင့်တဲ့ နေရာနဲ့.. လှူသင့်တဲ့ အခါ တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ လှူသင့်တဲ့ ပစ္စည်းကိုလဲ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာ ဖြစ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အရေးကြီးအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ စားဖို့။ ၀တ်ဖို့။ နေဖို့။ ကျန်းမာဖို့..
ပိုစ်တင်လိုက်တာ သူကြီးဆင်ဆာနဲ့မိနေပြီထင်တယ် ။ တက်မလာဘူး ။ :grin: သူကြီးလည်း ခုချိန်ဆိုအိပ်နေပြီဆိုတော့ ။ ဒါကြောင့်စောင့်မျှော်နေသူများအတွက် ဒီကနေဘဲတင်လိုက်ပါရစေ
အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သူများ လက်ချက်ကြောင့် ကြားထဲမှာ မြေစာပင်ဖြစ်ရတဲ့ ရခိုင်ဒေသ နေ မြန်မာပြည်ဖွား သွေးချင်း တို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ တစ်သွေးထဲ တသားထဲ ရှိနေပါတယ် ဆိုတာ ပြသချင်ပါတယ်။ ပြသကြပါစို့
့ ဆိုတဲ့ ဘဘဘလက်ရဲ့ ပြောစကားလေး နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြလိုက်ပါရစေ။
ဒီ ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွာသား တစ်ဦးမှ ရေးပေးတာပါ ။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ ပြောနိုင်တဲ့ အချိန်တစ်ခုမှ ပြောတော့မယ်။ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ တွေးချင်ရင်တွေးထားပေါ့နော်။
ဒီနေ့ (၁၀-၆-၂၀၁၂) နေ့လည် နှစ်နာရီမှာ ကျွန်တော်၊ ဘဘဘလက်ချော၊ ဦးဦးပါလေရာ၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ကိုအမတ်မင်း၊ နဲ့ ခုန ခေါင်းစဉ်လေး ရေးပေးတဲ့ ရွာသား ရယ်တို့ ဆုံဖြစ်ပါတယ် ။
ခေါင်းဆောင်ရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့လေးတစ်ခု အနေနဲ့ အတူလုပ်ကြဖို့ စိတ်ကူးကြပါသည် .
ကောက်ခံရေး ဆက်သွယ်ရေး အတွက်ကို ကိုရွှေတိုက်စိုး ၊ ကို အမတ်မင်းတို့ ကတာဝန်ယူကောက်ခံပေးပါ့မယ်။ သူတိှု့နှစ်ယောက်ကိုရွာသားတစ်ယောက်က နောက်ကကူညီအားဖြည့်ပေးပါ့မယ်။ ကိုရွှေတိုက်စိုး နဲ့ ကိုအမတ်မင်းတို့ကို က ရွာသူားများကော ရွာအလည်လာ စာဖတ်သူများရော ရွာ့အလှုပွဲတွေမှာ မြင်တွေ့နေကြဆိုတော့ မျက်နှာသ်ိဖြစ်ပြီးသားနေကြမှာပါ။
ရလာတဲ့ အလှုငွေကို ဦးဦးပါလေရာ ထံမှာ အပ်ထားပြီး ငွေကောက်ခံချိန် လိုအပ်လာခဲ့ရင် ဘဘဘလက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့က ၀င်ရောက်အားဖြည့်ပေးပါ့မယ် ။
ကောက်ခံရရှိတဲ့ ငွေသားများကို ဒီပိုစ်မှာဘဲ update လုပ်ပြီးတင်တင်ပေးသွားပါ့မယ် ။ ဒါကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူသွားပါ့မယ်။ နေစဉ် ည ၁၀နာရီလောက်မှာ လုပ်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါသည်။
အန်တီပဒုမ္မာ ၊ ဆရာမ မမ ၊ ဆူး ၊ etone တို့ကို လည်း အကူအညီတောင်းခံထားပြီး သူတို့လည်း ကူညီပါ့မယ်လို့ပြောပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်သိပြီးသားရွာသူားများ သူတို့ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးပို့လူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့ထံမှ ကိုရွှေတိုက်စိုးတို့ သွားရောက်ယူပြီး ဦးဦးပါလေရာကိုအပ်ပါ့မယ်။
etone ဦးဆောင်တဲ့ ဦးကျော်သူ ၏ နာရေးကူညီမှု့ အသင်းအလှု ၊ မမ နဲ့ ဆူးတို့ ဦးဆောင်တဲ့ ပန်းတနော်ဆေးရုံ အလှုတွေလိုဘဲ ထင်သာမြင်သာရှိအောင်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ ။
မန္တလေး အတွက် ကို လေးပေါက်ကို အကူအညီတောင်းခံထားပြီး လေးပေါက် ကကူညီမယ်လို့ ဘဘဘလက်ကိုပြောပြထားကြောင်းသိရပါသည်။ လေးပေါက်ကို ဆက်သွယ်လို့ ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေး လေးပေါက်မှတင်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
နေပြည်တော်မှလှုလိုသူများရှိလျှင် နေပြည်တော်မှာလိုအပ်လျှင် ပြေးလွှားပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကိုရွာစားကျော်ကိုဘဲ အကူအညီတောင်းခံပါရစေ ။ ကိုရွာစားကျော်မှ စုစည်းပြီး ကိုရွှေတိုက်စိုးတို့ဆီ ပြန်လည် လွှဲပေးပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံခြား ရောက်နေသူများမှလည်း လှုဒါန်းလက်ဆောင် ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လွှဲနေကြ ပုံစံအတိုင်းငွေလွှဲပို့နိုင်ပြီး ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ကိုအမတ်မင်းတို့မှ သွားရောက်ထုတ်ယူပေးပါလိမ့်မယ် ။ အသေးစိတ်ကို သူတို့ထံ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ကောက်ခံမှုကို ဘဖောပြောသလို ဒီလ ကုန် ၃၀ ရက်နေ့အထိကောက်ခံပါမည် ။
ဘယ်မှာဘယ်လို လှုကြမည်ဆိုသည်ကိုတော့ ယခု ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးပါဘူး ။ ဘယ်သူ့ကို ပေးအပ်လူဒါန်းမယ်ဆိုတာ ဒီကြားထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အထိရောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်သွားကြရန် စဉ်းစားထားကြပါသည်။ အားလုံးရင်ထဲ က အတိုင်းကျွန်တော်တို့ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ သက်ဆိုင်သူထံတိုက်ရိုက်ရောက်တာဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေပါတယ် ကြိုးစားပါ့မယ် ဆိုတာလည်း အသိပေးပါရစေ။ ရွာသူားများလည်း ဆက်လက်အကြံဥာဏ်ပေးကြပါ။
ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်၊ ရန်ကုန်အတွက် နှစ်ခု ကတော့ .
ကိုမင်းဇော်ရေ . ကိုမင်းဇော်လူကိုယ်တိုင်ကူညီမယ်ဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီနေ့တော့ အမြန်စုစည်းလိုက်တာမို့လို့ မခေါ်လိုက်နိုင်ပါဘူး။အကူအညီလိုလာတဲ့ အခါ ခေါ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
အခုလို ဖြစ်မြောက်အောင် စတင်လှုံ့ဆော်အကြံပေးလိုက်တဲ့ ဘဖော နှင့်တကွလူအား ငွေအားဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြမည့် သူများ ၊ လိုအပ်တာကူညီပါ့မည်ဆိုသည့် သံတွဲမှ ကိုသန်းထွဋ်ဦး၊ ကျောက်ဆည်မှ လိုအပ်လျှင် လူကိုယ်တိုင်ကူညီပါ့မည်ဆိုသည့် ကိုသီဟရာဇာ၊ ကားမောင်း ပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကိုဝင်း တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပါဝင်လှုဒါန်းမည်ဆိုသူများ ၊ အကြံဥာဏ်ပါဝင်ပေးသူများ သတင်းပြန်ဖြန့်ပေးသူများ အားလုံး အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။ အားလုံးရဲ့ နံမည်တွေ တပ်မပြောနိုင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
သူကြီးကိုတော့ အထူးပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါသည် ။ အားလုံးက အမြဲကျေးဇူးတင်နေကြတာမို့လို့ပါ ။
အခုတော့ အမြန်ရေးတင်လိုက်တဲ့ အတွက် ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်လှုမယ် နုတ်ကတိ ပေးထားကြပြီ ဆိုတာကို နောက်မှပြန်တင်ခွင့်ပြုပါ။
ဂေဇက်ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားပြသပါစို့ လား..။။ aye.kk
မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကို ဒီလိုနေရာမှာမှ မပြရင် ဘယ်လိုနေရာမှာ သွားပြကြမှာလဲဗျာ။
သိရှိပါကြောင်း၊ မဆိုင်းမတွ ချက်ချင်းဆိုသလို လက်ဆောင်အတွက် ကြိုးပမ်းကြကုန်သော ရပ်မိ၊ရပ်ဖတို့နှင့် ရွာသူားတို့အားလေးစားရပါကြောင်း၊ အလှူရှင်ကြီးငယ်အားလုံးတို့၏ သဒ္ဒါတရားတ်ို့အား သာဓုခေါ်ပါကြောင်း…….။
ကျေးဇူးပါဗျို့…ရွှေတိုက်စိုး နဲ့ အမတ်မင်းကို ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းပါမယ်ခဗျာင်္း…
ကျနော်က လေးပေါက်တို့ ဖြဲမတို့နဲ့ချိတ်ပြီးလှူဦးမယ် ဖြဲမ ညည်းဖုန်းနံပါတ်က ဘယ်လောက်လဲ
ဂေဇက်မှ “ရခိုင်သွေးချင်းများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလက်ဆောင်” သို့
ကျနော် ရွာစားကျော်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ် ထပ်ပြောပါမယ်
၀၉ ၄၃၀ ၁၇၀ ၆၉ ဖြစ်ပါတယ်..
၁၀ရက်နေ့ည ၈နာရီ သတင်းကလာတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ မိန့်ခွန်း ကို နားထောင်ပြီး သူ့ကို ပိုပြီးလေးစားပါတယ်။
ပညာရှိ စကား တွေလို့ ကျွန်မ ခံစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အလွန်မှန်ကန် တဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ရင်း နဲ့ ပြောတယ်လို့ လဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အားလုံး သမ္မတကြီး ရဲ့ စကားတွေကို အမှန်တွေလို့ လက်ခံနားလည် ပေးချင်ပါတယ်။
ပြည်သူ လူထု အားလုံးက အုပ်ချုပ်သူများကို အမှန်ဘဲ အားကိုးချင်ပါတယ်။
ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ များကိုလဲ တိကျစွာ လေးစားလိုက်နာ ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ကို ပိုယုံကြည်နိုင်ဖို့ ပိုအားကိုးနိုင်ဖို့ အုပ်ချုပ်သူ များဘက်ကလဲ အမှန်အကန် ဖြစ်ကြောင်း ကို သေချာစွာ ပြပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
မရိုးသားဆဲ လူများ ရှိနေဆဲ ဆိုရင်လဲ သူတို့ကို ချန်ပစ်ခဲ့ဖို့သင့်ပါပြီ။
သမ္မတကြီး လဲ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိပါစေရှင်။
ရခိုင်ဒေသ အပါအဝင် မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး လဲ မကြာခင်မှာဘဲ အေးချမ်းသာယာ တိုးတက်ပါစေ။
ရခိုင်သားများ စစ်တွေသားများ ဂျီမေးအကောင့်လေးတွေပြောပြကြပါ .. ဆက်သွယ်ပါရစေ
နှောက်ယှက်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ .. မနေနိုင်တော့လို့ပါ .. အားလုံးကို အားနာပါတယ် .. လှူလည်းလှူကြပါ လုပ်အားဖြင့် သွားရောက်ကူညီမယ့်သူတွေရှိရင်လည်း အတူတူ သွားရောက်စေချင်ပါတယ် .. ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ် …
ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ရခိုင် နယ်ခံပြည်သူတွေသာမက (သတင်း မှန်ခဲ့ရင်) အခုသူတို့ကို အမှန်တကယ် အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ တပ်မတော်သား တွေကိုပါ လှုချင်သား။